भिडियो | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal | Page 3
हरियालीको कालिज फार्ममा पसेको चितुवा हेर्नेको भीड (भिडियो सहित)
विकल्प न्यूज/बेनी भदौं २६ गते । बेनी नगरपालिका ४ सिंगामा रहेको हरियाली ग्रुपको कालिज फार्म भित्र शुक्रबार राती पसेको चितुवा हेर्ने सर्वसाधरणहरुको भीड लागेको छ । चितुवा पसेर कालिजका चल्ला मारेको छ । वरीपरी तारजालीले घेरिएको कालिज फार्म भित्र चितुवा जम्प गरेर पसेको हुन सक्ने संचालक शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो । फार्ममा रहेका करिब ६ सय कालिजका […]
बेनी नगरपालिकाले सार्वजनिक ग¥यो कोरोना रोकथाममा भएको खर्च विवरण
विकल्प न्यूज/बेनी भदौं ८ गते । बेनी नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च विवरण गरेको छ । सोमबार नगरपालिकामा पत्रकार भेटघाट मार्फत नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले कोरोना रोकथामका लागि भएको आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ,उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी […]
राम्रो अभियान ! पाडापाडी संरक्षणमा जुट्दै भगवान खड्का (भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी भदौं ६ गते । बेनी नगरपालिका ४ सिंगाका भगवान खड्काले पाडापाडी संरक्षण अभियान थाल्नुभएको छ । भैंसी ब्याउदा वित्तिकै पाडापाडी कटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न खड्काले पाडीपाडी संरक्षण अभियान थाल्नुभएको हो । लैहिनो पाडापाडी काटेर खाने प्रचलनले भैंसी उत्पादन नहुने र मुल्य बृद्धि हुनथालेका छ । खड्काले साना साना पाडापाडीहरु उर्काउने र रागो र भैंसी […]
आहा कालिज पालन ! भिडियोमा हेर्नुहोस हरियाली ग्रुपको कालिज पालन
विकल्प न्यूज/बेनी भदौं ४ गते ।म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ४ सिंगामा रहेको हरियाली ग्रुपले व्यवसायिक रुपमा कालिज पाल्न थालेको छ । करिब पचास लाख लगानी गरेर १० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यवस्थित खोर बनाई कालिज पाल्न थालेको हो । हरियालीको यो नयाँ उत्पादन हो । नयाँ उत्पादनले राम्रो बजार लिने सक्ने सञ्चालकहरुले विश्वास गरेका छन् । हरियाली ग्रुपले […]
अष्ट्रेलिया जाने सोंच त्यागेर गाउँमै बाख्रापालनमा रमाउँदै किष्ण (भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी भदौं १ गते । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ६ चुत्रेनीका ३० वर्षीय युवा कृष्ण मल्लले अष्ट्रेलिया जाने सोंच त्यागेर गाउँमा व्यवसायिक रुपमा बोयर जातका बाख्रापाल्न थाल्नुभएको छ । ४ वर्ष इराकमा विताउनुभएका किष्णले गाउँ फर्किएर बाख्रा पाल्न थाल्नुभएको हो । हेर्नुहोस भिडियो
विकल्प न्यूज/बेनी साउन १८ गते । म्याग्दीको सदरमुकाममा रहेको बेनी अस्पतालले पहिलोपटक मृगौलाको डायलासिस सेवा सुरु गरेको छ । ४ वटा मेशिनबाट आइतवार देखि डायलासिस सेवा सुरु गरेको हो । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मान्त्रालय र बेनी अस्पतालको सहकार्यमा डायलासिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आइतबार दुइजना विरामीको डायलासिस गरेर सेवा सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ […]
बेनीमा मास्क नलगाई हिड्नेलाई च्याप्प समाउँदै गाडीमा हाल्दै (फोटो/भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी साउन १५ गते । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा मास्क नलगाई हिडडुल गर्ने सर्वसाधरणहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका नियमहरु पालना नगर्नेहरुलाई कडाई गर्न थालेको हो । मास्क नलगाई हिडेका पचासजनालाई विहिवार बेनीबजारका विभिन्न स्थानहरुबाट प्रहरीले पक्राउ गरी सेचत बनाएर छाडेको प्रहरी निरिक्षक डाक्टरप्रसाद […]
भिडियोमा हेर्नुहोस बिमका पहिरो पीडितको पीडा
विकल्प न्यूज/बेनी साउन १२ गते । गत असार २५ गते राती परेको भिषण वर्षापछि बिम गाउँ क्षणभरमै पहिरोमा परिणत भयो । गाउँनै शोकमा ढुब्यो । पहिरोमा परेर ९ जनाको ज्यान गयो । एउटा परिवार त सखाप नै भयो । पहिरोले २६ घरलाई पूर्ण क्षति पु¥यौं । ५५ देखि ६० घर उच्च जोखिममा छन् । गाउँमा […]
ठाकुरप्रसाद आचार्य/मराङ साउन ११ गते । गत असार २५ गते धौलागिरि गाउँपालिका ६ मराङ नाम्रुककी सविना विक बेलुकाको खान खादै थिइन । अविरल वर्षा भइरहेको थियो । एकैछिनमा गाउँ माथिबाट पहिरो खस्न थाल्यो । छिनभरमै पहिरोले घर घेरियो । खाना खादै गरेको भाग छाडेर भाग्यौं सविनाले भन्नुभयो ‘श्रीमानले पाँचदिनको बच्चा, मैले अर्को छोरीलाई समाएर भाग्यौं ।’ […]
नदी कटान र पहिरोका कारण बेनी – गलेश्वर सडकमा जोखिम बढ्यो (भिडियो सहित)
विकल्प न्यूज/बेनी साउन ७ गते । बेनी–गलेश्वर सडकको जलेश्वर खण्डमा पहिरो गएका कारण जोखिम बढेको छ । सडक माथिबाट आउने पहिरो र कालिगण्डकी नदीले कटान गर्दा सडक भासिएका कारण सवारी साधन आवतजावत र सर्वसाधरणहरुलाई समेत पैदल हिड्न सकस परेको छ । जलेश्वर नजिक सडक माथिबाट आएको पहिरोका विहिवार विहान सडक अवरुद्ध भएको हो । एक्साभेटरले पहिरो पन्छाउने […]
कालिगण्डकीमा आएको बाढीले बेनीको बसपार्क कटान गर्न थाल्यो (तस्विर र भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी साउन ६ गते । सोमबार धौलागिरि रेन्जमा भएको भारी वर्षाका कारण कालिगण्डकीमा आएको बाढीले बेनीको कालिपुल स्थित वसपार्क कटान गर्न थालेको छ । नदीमा पानीको सतह वढेपछि कालिपुल स्थित पेट्रोलपम्प नजिक नदी किनारमा लगाइएको ग्याविन जाली भत्कीन थालेको छ । जाली भत्किन थालेपनि बसपार्क नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको छ । यसै गरी […]
कालिगण्डकी र म्याग्दी खोलामा फेरी आयो बाढी(भिडियो)
विकल्प न्यूज/बेनी साउन ५ गते । सोमबार साँझ एक्कासी कालिगण्डकी र म्याग्दीखोलामा ठूलो बाढी आएको छ ।रुप्से झरनामा आएको बाढीका कारण कालिगण्डकीमा पानीको सतह बढेको अनुमान गरिएको छ । रुप्सेमा आएका बाढीका कारण झरनाको फेदीमा रहेको होटल,पार्किङ गरेर राखेको बस र एक्साभेटर बगाएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको प्रहरी नायब उपरिक्षक किरण जंग कुँबरले बताउनुभयो । […]
विकल्प न्यूज/सिवाङ असार २७ गते । ‘मध्यरातको समय थियो एक्कासी माथिबाट ठूलो पहिरो खस्यो । सवै जना भागभाग भयौं । हेर्दा हेर्दै आँखै अगाडि तिनजनालाई पहिरोले पु¥यो । बचाउन सकिएन । ’ मराङ कल्लेनीका तोरण बहादुर भण्डारीले भन्नुभयो ‘भागेर ज्यान बच्यौं छिमेकीलाई बचाउन सकिएन ।’ विहिवार राती ठूलो पानी परेको थियो । मध्यरातमा त माथिको […]
विकल्प न्यूज/बेनी असार २६ गते । विहिवार राती देखि परेको अविरल बर्षा सँगै म्याग्दी र कालीगण्डकीमा ठूलो बाढी आएको छ । म्याग्दी खोलामा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । कालि र म्याग्दीमा पानी सतह बढेपछि नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधरणहरुलाई उच्च सर्तकता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ । https://www.youtube.com/watch?v=kMJKIVER9L0